Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » ProCare Health novidin'ny Clinigence Holdings
Clinigence Holdings, Inc., iray amin'ireo orinasam-pandraharahana ara-pahasalamana eo amin'ny sehatry ny firenena manana alika ara-teknika, dia nanambara androany fa nahavita ny fahazoana ProCare Health, Inc.
Miorina ao amin'ny Garden Grove, Kalifornia ary niorina tamin'ny taona 2011, ny ProCare dia fikambanana sampan-draharaha mitantana ("MSO") izay manome tolotra ho an'ny fikambanana fikojakojana ara-pahasalamana iray ("HMO") sy fikambanana mpitsabo tsy miankina telo ("IPA") any atsimo sy atsimo. Kalifornia Avaratra. MSOs dia fikambanana mpandraharaha izay manome ny fotodrafitrasa ara-pitantanana sy ny teknolojia ilaina ho an'ny IPA mitondra risika mba hiasa amim-pahombiazana amin'ny fifandraisany amin'ireo mpandoa vola sy masoivoho mifehy ny fifanarahana. Ny MSO dia ahafahan'ny fikambanan'ny mpitsabo hahomby amin'ny fiheverana ny loza ara-bola sy ny mponina, hanatsara ny fahombiazan'ny fikambanana amin'ny fikarakarana fikarakarana ary hanome famakafakana angon-drakitra azo atao. ProCare dia manome fitantanana fitakiana, fanarahan-dalàna, fanomezan-dàlana, fitantanana kalitao, fitantanana fampiasana, fifanarahana, fifandraisana amin'ny mpamatsy, serivisy ho an'ny mpikambana, fitantanana fikarakarana, fanatsarana ny kaody ary serivisy fanaovana tatitra ara-bola, ankoatry ny serivisy hafa.
Araka ny fehezan-kevitry ny fividianana stock stock, Clinigence dia namoaka 759,000 ny zana-tahiry vao natolotry ny tompon'ny ProCare tamin'ny fikatonany ho takalon'ny 100% ny vola azo antoka amin'ny ProCare. Ho fanampin'izay, napetraka ny rafitra iray ahazoana valiny hanomezana valisoa ny ProCare amin'ireo fifanarahana MSO vaovao amin'ny ho avy.
"Ny fahazoana ProCare dia ampahany amin'ny paikadim-pitomboana misy eto aminay ary ahafahantsika manitatra bebe kokoa ny portfolio amin'ny sehatry ny MSO," hoy i Warren Hosseinion, MD, ny filoha sy ny tompon'andraikitra ambony. "Faly izahay mandray ny ekipa ProCare, izay manana fahaizana sy fitiavany hampatanjaka ny orinasanay."
"Faly izahay manatevin-daharana an'i Clinigence, izay manana ekipa mpitantana manana traikefa an-tsehatra mihoatra ny 100 taona eo amin'ny sehatra," hoy i Anh Nguyen, mpanorina sy Lehiben'ny Executive ProCare Health. "ProCare dia lohalaharana amin'ny fikolokoloana fitantanana, mifantoka amin'ny fitantanana fampiasana, ny fanitsiana aretina azo ovaina ary ny mpanome fanampiana amin'ny fanomezana fikarakarana kalitao an'ireo marary."